Wasiirka Hawlaha Guud iyo Gudoomiyaha Gobolka Maroodi Jeex oo ka Wadda Hadley
Hargeysa (Dawan):- Wasaaradda hawlaha guud, dhulka iyo guryaynta Somaliland iyo maamulka gobolka Maroodijeex, ayaa ka wada hadlay hawsha diiwaan gelinta hantida ma-guurtada iyo guurtada ah ee qaranku leeyahay ee gobolka Maroodijex iyo sidii looga wada shaqayn lahaa.
Wasiirka wasaaradda hawlaha guud, Cabdirashiid Ducaale Qambi iyo guddoomiyaha gobolka Maroodijeex Jaamac Xaaji Axmed Cabdi, ayaa ka wada hadley sidii ay uga wada shaqeyn lahaayeen diiwaangelinta hantidda ma guurtadda ah ee qaranku leeyahay ee gobolka Maroodijeex.
Wasiirku waxa uu bulshada ku nool gobolka Maroodijeex u soo jeediyay in ay kala shaqeeyaan sidii hantida qaranka ee ma guurtada ah loo diwaan gelin lahaa, isla markaana ay ugu fududayn lahaayeen hawl wadeenada wasaaradda ee ku hawlan diiwaan gelinta hantida qaranka ee gobolka Maroodijeex.
Kulanka oo ka qabsoomay hoolka shiraraka ee wasaaradda hawlaha guud, ayay labada dhinac kaga wada hadleen mudnaanta ay dalka u leedahay in la diiwaan geliyo hantida qaran ee ma guurtada ah iyo sidi looga wada shaqayn lahaa.
Wasiir Qanbi oo ugu horrayn kulankaa ka hadlay ayaa sheegay in ay dhammaan goboloda dalka oo dhan ay kormeer ku soo sameeyeen, marka laga reebo gobolka Awdal oo ay isna tegi doonaan.
Wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Waxaannu kormeer ku soo marnay dhammaan goboladda dalka, marka laga reebo gobolka Awdal oo iyaddana magaaladdiisa Boorama aanu imika ku sii jeedno, waxaan bulsho weynta gobolka Maroodijeex ka codsanayaa in ay hawshaasi nagala qayb qaataan oo si hagar la’aana noogala qayb qaataan, anaga oo u mahad naqayna intii aanu illaa hadda gobolkan Maroodijeex ka wadney diiwaangalinta hantidda guurtada iyo ma guurtadda ah, in bulshada reer Somaliland ay nagala qayb qaateen. Waxaanan u mahad naqayaa maamulka gobolka.”
Wasiirka hawlaha guud Cabdirashiid Ducaale Qambi waxa kale oo uu u mahad celiyay ciidamada iyo taliska booliska Somalialnd, oo uu ku ammaanay sida hagar la’aanta ah ee ay ula shaqeeyaan wasaaradda hawlaha guud, waxaanu yidhi “Waxaan u mahad celinayaa taliska ciidanka booliska jamhuuriyadda Somaliland oo mar walba si joogta ah wasaaradda ula shaqeeya, waxaan u mahad celinayaa Injineeradda iyo shaqaalaha wasaaradda oo hadh iyo habeen heegan u ah soo celinta hantidda ma guurtada ah iyo ta guurtadda ah ba diiwaangalinteeda, waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ka codsanaya dadweynaha gobolka Maroodijeex in ay nagala qayb qaataan hawshaasi.”
Agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta Cilmi Cabdiraxmaan Cashuur, oo isaguna kulankaasi ka hadlay, ayaa faahfaahin ka bixiyay degmooyinka hoos yimaadda gobolka Maroodijeex ee ay sida habsamidda leh uga socoto hawsha diwaangelinta hantida ma guurtadda ee qaranku leeyahay, waxaanu yidhi “Gobolka Maroodijeex waxaanu ka bilowney degmadda Ibraahim Koodbuur, 26-ka June. Waxa kale oo lagu jiraa degmadda Gabiley.
Dhab ahaantii si wanaagsan oo hagar la’aan ah, ayay gobolka Maroodijeex uga socotaa hawsha diiwaangelinta hantidda guurtadda iyo ma guurtadda ahi, si fiicanna waa naloogala qayb qaatay.”
Guddoomiyaha gobolka Maroodijeex Jaamac Xaaji Axmed Cabdi, ayaa isagu ballan qaaday in ay maamul gobol ahaan la shaqaynayaan wasaradda, isla markaana ay diyaar u yihiin in qaranka hantidiisa la diiwaan geliyo. Waxaanu yidhi “Diiwaangelinta hantidda ma guurtadda iyo guurtada ah ee ay bilowdday wasaaradda hawlaha guud, dhulka iyo guriyeynta, dhab ahaan waa masuuliyaddii ay qaranka ugu igmanaayeen, aad iyo aad ayaanu uga mahad naqaynaa.
Qaranka haddii aanay hantidiisu aheyn mid diiwaangashan, run ahaantii waa ay kala lumeysaa, waana hay’addii u xil saarneyd. Haddii maamulka gobolka Maroodijeex aanu nahay waxaanu diyaar u nahay in aanu idin kala shaqeyno diiwaangelinta hantidda ma guurtadda iyo guurtada ah ee qaranku leeyahay ee gobolka Maroodijeex iyo wax kasta oo dan guud ah, haddii ay tahay dhul bannaan iyo haddii ay tahay hanti kale ba.”